Fialamboly, fakana sary ary famokarana, fifanarahana androany ao amin'ny App Store | Vaovao IPhone
Fahafinaretana, sary ary famokarana, fifanarahana androany ao amin'ny App Store
Manomboka ny faran'ny herinandro ary noho izany dia fotoana mety izao hisintomana ny sasany lalao sy fampiharana vaovao amin'ny iPhone sy iPad ary manana fotoana mahafinaritra mahafinaritra.
Amin'ity indray mitoraka ity izahay dia manome anao kely ny zava-drehetra: kalandrie tena misy habaka sy fahitana, fampiharana tsy mampino izay ahafahanao mamoaka ny fahaizanao, ary lalao iray tany am-boalohany sy manaitaitra. Ary ambonin'izany rehetra izany Raha maika ianao, dia azonao atao aza ny manararaotra ilay tolotras.
1 Kalandrie Vantage
2 DesignLab Studio
3 Speedball 2 Fivoarana
Manomboka amin'ity rindranasa ity izahay fa, araka ny efa azonao atao, dia a fampiharana kalandrie izay nohavaozina vao haingana ho an'ny iOS 11 ary mamaritra ny tenany ho "mora sy tsotra". Ny tsiambaratelony dia ny namboarina ho tanteraka customizable avy amin'ny mpampiasa ary tena hita maso. Ny endritsoratra, loko, hazo vita amin'ny hazo hafa dia hanampy anao hanasongadina ireo teny nalaina izay manan-danja indrindra aminao ary hahita azy ireo amin'ny fotoana voalohany, ary koa hahita fomba fijery mahafinaritra momba izay ho avy.
Ankoatra izany, miharo amin'ny kalandrie mifanentana amin'ny iOS toy ny Google Calendar, iCloud, Outlook, sns.
"Vantage Calendar" dia misy vidiny mahazatra 4,49 € fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana.
«DesignLab Studio» dia a fampiharana famolavolana matihanina Hahafahanao mamorona rakikira, sary, sary, karatra firariana, fitaovana fampiroboroboana, meme ary maro hafa amin'ny fomba tsotra amin'ny fampiasana ireo "sary, sary, endritsoratra ary modely" an-tapitrisany. Ho fanampin'izay, manana fitaovana fanovana am-polony izy mba hahafahanao mamorona izay rehetra azonao eritreretina.
Ny fampiharana dia nanjary fampidinana maimaim-poana, fa raha te hanararaotra ny asany sy ny endriny rehetra ianao dia tsy maintsy miverina amin'ny 4,99 € isam-bolana na 19,99 € isan-taona.
DesignLab - Famoronana endrikamaimaim-poana
Speedball 2 Fivoarana
Ary satria eo am-baravaran'ny faran'ny herinandro isika dia mifarana amin'ny lalao. Amin'ity tranga ity dia «Speedball 2 Evolution», lalao iray izay afangaro eo amin'ny soccer sy hockey, miaraka amina fikitihana casino be dia be ary hafainganam-pandeha betsaka.
Azonao atao ny milalao manararaotra ny gyroscope amin'ny alàlan'ny fametahana ny iPhone-nao ary koa amin'ny joystick virtoaly hahafinaritra anao ambaratonga tsirairay am-polony, mode Multiplayer ary ekipa hatramin'ny 28 azo isafidianana.
Ny "Speedball 2 Evolution" dia misy vidiny mahazatra € 2,29 fa ankehitriny dia afaka mahazo 1,09 € fotsiny ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » fivarotana » Fahafinaretana, sary ary famokarana, fifanarahana androany ao amin'ny App Store
Sergio Rivas dia hoy izy:
Fampiharana tena mahaliana, indrindra tiako matetika ny sary. Misaotra tamin'ny lahatsoratra, miarahaba.
Valiny tamin'i Sergio Rivas
Fizarana Carpool Karaoke miaraka amin'i Linkin Park hivoaka mivantana amin'ny Facebook
Moa ve ny iOS 11.0.2 manamboatra olana amin'ny bateria?